၂၀၁၈ Kelley Blue Book မှာ “Best Resale” ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆု ၅ ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Honda! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ Kelley Blue Book မှာ “Best Resale” ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆု ၅ ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Honda!
Honda အနေနဲ့ ၂၀၁၈ Kelley Blue Book ရဲ့ Best Resale Value Awards ကို model အသစ်ကား ၅ စီးနဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Accord, Odyssey, Fit, HR-V, Ridgeline အစရှိတဲ့ကားတွေနဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ ကားအားလုံးရဲ့ Month of production ကတော့ ၂၀၁၈ ပါ။ အဲ့ဒီထဲက Ridgeline ကတော့ Top 10 ထဲဝင်ပြီးဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကားအသစ်လေးတွေနဲ့ဆု တွေ ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
ကားတစ်စီးဟာ စစချင်းစီးတဲ့ရက်ကနေ နောက်ထပ် ၅ နှစ် (သို့) ၅ နှစ်ကျော်အထိ မပျက်ပဲအကောင်းအတိုင်းရှိနေတယ် ဆိုရင် Kelley Blue Book ရဲ့ Best Resale Value Awards ကိုရရှိနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို ဆု တွေကြောင့် Automaker တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ Vehicle တွေ ကိုအရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ ကြာရှည်ခံအောင်ကြိုးစားပြီးထုတ်မှာဖြစ်သလို ကားဝယ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ပိုပြီးစိတ်ချ လက်ချဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kelley Blue Book ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းလှပါတယ်။ Honda ရဲ့ဂုဏ်ဆောင်ကား ၅ စီးကတော့ အောက်မှာစောင့်ကြိုနေပါပြီ။
2018 Honda Accord (Midsize Car)
2018 Honda Odyssey (Minivan)
2018 Honda Fit (Subcompact Car)
2018 Honda HR-V (Subcompact SUV/Crossover)
2018 Honda Ridgeline (Top 10)
Not one, not two, but five best resale value awards?! Now that’s quite an accomplishment. https://t.co/VC9hqdubmY
— Mistlin Honda (@Mistlin_Honda) January 14, 2018